Indawo yokugcina: Ukubalisa amaBali kwi-iPad | Martech Zone
NgoLwesine, Meyi 22, 2014 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kutshanje sine-webinar kwisayensi yokubalisa amabali kunye nabahlobo bethu e Ubuyile.tv. Akuyonto intsha kwintengiso kunye nentengiso, kodwa ngasizathu sithile, ukubalisa amabali sele kuqalile ukuqaphela kwiminyaka yakutshanje. Abathengi kunye nabathengi beshishini bahlala beguqula lula xa kukho iqhina leemvakalelo phakathi kwabo kunye neempawu abazithandayo… kodwa kuyathakazelisa ukuba mingaphi iminyaka, imibhalo ebhaliweyo kunye neendaba ezoyikekayo ziyaqhubeka zisikhathaza kumabonwakude nakwiwebhu.
Kumnandi ukubona amaqonga aguqukayo ukunceda abathengisi baphuhlise amabali abo kunokuba baqokelele malunga nokonga okanye amanqaku. Uvimba lukhululekile app iPad enethemba lokutshintsha oku. Indawo yokugcina ivumela abasebenzisi ukuba bakhe amabali kwisicatshulwa, ividiyo kunye nemifanekiso, kubandakanya umxholo ovela kwimithombo kubandakanya i-iPad Camera Roll, iDropbox, Flickr, kunye ne-Instagram.
Iziphumo zezinye zeendlela ezintle eziphendulayo kwiwebhu, kwiselfowuni kunye nokujongwa kwethebhulethi. Ukuba unayo iapp ye-iPad, ayisiyiyo kuphela ukuba unokwakha kwaye ubhale awakho amabali, ungaskrolela kuwo onke amabali amatsha athe aveliswa ngoGcino.
Kananjalo, ukujonga kwangaphambili kwebali kunokufakwa kwiphepha lewebhu. Nanku umzekelo:
Iziphumo zokugqibela ziyimbonakalo enokubakho okungenamda- ukudibanisa zonke izinto kunye nokongeza kubuchule bokuthanda, ukwabelana, okanye ukuphawula ngebali ekwabelwana ngalo.
tags: apilebuyanba.tvibhokisi lehlayoFlickrinstagramiOSiPadipad usetyenzisoUkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethinoluphendulayoibaliUkuxoxa ngamabaliipilisi